Vita Pazzapa dia miditra Raise your Voice
2007-10-26 @ 08:10 in Kolontsaina
Hiditra amin’ny famaranana ny Pazzapa V rahampitso sady io rahateo no prime faha-13. Araka ny filazan’ny mpanara-baovao moa dia tsy nahasarika toy ny taloha intsony ny pazzapa tamin’ity taona ity na dia mbola be mpanaraka aza izy. Tsy dia nisy loatra manko ny kotaba manaraka isaky ny vita prime isaky ny sabotsy ireny.Ny tena olana moa dia eo amin’ny resaka fifidianana amin’ny alalan’ny finday matetika.
Efa saiky tsy nisy ity andiany fahadimy ity noho ny fialan’ny Orange tsy ho mpanohana intsony saingy nahay nanararaotra niditra kosa ny Celtel. Izaho manokana moa mahita fa mety noho ny fahataran’ny sms ao amin’ny Orange (izay mety hahatratra 5 na 6 ora mihitsy aza araka ny efa niainana) no antony iray mandiso ny vatom-pifidianana amin’ny fanohanana mpihira iray io.